Zaky App 2022 Download For Android [Update] | APKOLL
Zaky App 2022 Download For Android [Update]
Zaky App dia fampiharana Android, izay manolotra sehatra sosialy tsara indrindra hizarana ny traikefanao sy hahafantaranao olon-kafa koa. Izy io dia manome ny mpampiasa hahazo fomba tsotra hifandraisana amin'ny mpampiasa hafa sy hankafizana. Ampidiro ao amin'ny Smartphone Android na Tableto ity fampiharana ity mba hidirana amin'ny serivisy rehetra misy.
Tena mora ny fiaraha-monina amin'izao andro izao ary manamora ny mpampiasa ny fitaovana Android. Misy fampiharana isan-karazany hita eny an-tsena, izay ahafahan'ny mpampiasa miditra mora foana ny serivisy rehetra momba ny sosialim-bahoaka. Matetika, ny fampiharana dia manome fidirana karama ho an'ny mpampiasa ary ny sehatra maimaim-poana dia manome serivisy fifampiresahana voafetra.
Ny fampiharana premium dia ho an'ny olona voafetra, izay afaka mandoa ny serivisy premium. Noho izany, tsy rariny mihitsy izany, ka izany no mahatonga anay hitondra zavatra tokana ho an’ny rehetra hampiasaina. Noho izany, eto izahay miaraka amin'ity sehatra ity ho an'ny mpitsidika anay.
Na iza na iza afaka miditra amin'ity sehatra mahavariana ity ary mizaha ny serivisy rehetra misy. Manome fidirana maimaimpoana amin'ireo serivisy rehetra misy azy io, amin'ny alalanao no ahafahanao manana traikefa fifandraisana tsara indrindra. Misy serivisy isan-karazany misy amin'ity rindranasa ity, izay hozarainay aminareo rehetra. Noho izany, mijanona miaraka aminay ary hizaha izany rehetra izany.
Topimaso momba ny Zaky App
Izy io dia rindranasa sosialy Android, izay manolotra ny sehatra tsara indrindra amin'ny sehatra fifampiresahana sy fizarana sosialy. Manolotra ireo mpampiasa hiresaka amin'ny mpampiasa hafa eran'izao tontolo izao izy io, izay misy tovovavy mafana sy zazalahy tsara tarehy. Sehatra misokatra izy io, izay manasa ny rehetra hiditra sy hiresaka maimaim-poana.
Misy fizarana samihafa misy ao amin'ity rindrambaiko ity, izay ahafahanao miditra amin'ireo endriny rehetra misy. Mila fisoratana anarana izany, izay tsy maintsy fenoinao vao tafiditra amin'ity sehatra ity. Manolotra fizotran'ny fisoratana anarana marobe izy io, izay misy Gmail sy Facebook.
Noho izany, azonao atao ny mampifandray mora foana ny iray amin'ireo kaonty ireo amin'ity fampiharana ity ary mahazo fidirana mivantana amin'izany App chat. Rehefa vita ny fisoratana anarana dia tsy maintsy mametraka avatar ianao. Zaky Apk dia manolotra ny fanangonana tsara indrindra amin'ny endri-tsoratra anime, izay azo zahana tanteraka.
Ny mpampiasa dia afaka mamorona avatar mora foana, izay azonao ampanjifaina mifanaraka amin'ny fombanao. Ho hita eo amin'ny mombamomba anao ny avatar, midika izany fa tsy maintsy manao avatar mamorona ianao. Misy efitrano misy, izay manome lohahevitra samihafa.
Ny olona samihafa dia miditra ao amin'ny efitrano ary miresaka lohahevitra iray. Noho izany, afaka miditra sy mandre momba ny fomba fijery hafa ianao ary mizara ny zavatra niainanao koa. Raha te hiresaka manokana amin'ny olona iray ianao dia manome rafi-hafatra an-tsoratra ihany koa.
Azonao atao koa ny mandefa Paper Plane, izay azon'ny olona vakiana sy averina. Noho izany, misy fomba maro ahafahan'ny mpampiasa mifandray sy miala voly. Izy io dia manolotra radara ho an'ny mpampiasa hahitana namana sy mpampiasa hafa hifandraisana.
Izahay dia nizara ny sasany amin'ireo tena mampiavaka an'ity fampiharana ity aminao rehetra ao amin'ilay faritra etsy ambony, saingy misy maro hafa. Noho izany, azonao atao ny misintona ny Zaky For Android ary manadihady misimisy momba azy io. Raha te hahazo fampiharana bebe kokoa ianao dia manana fampiharana manokana azonao atao.
Anaran'ny fonosana com.shujiu.Zaky
Developer Ekipa Zaky
Sehatra sosialy sy fifandraisana tsara indrindra
Betsaka ny mpampiasa mavitrika
Fomba mora hahitana namana vaovao
Midira sy mamorona efitrano
Serivisy fifampiresahana tsy miankina
Rafitra famoronana bilaogy
Fanambarana fiaramanidina taratasy
Rafitra fifampiresahana amin'ny feo
Hita ao amin'ny Google Play Store izy io, saingy tsy mila mitsidika sehatra maro ianao ary mandany ny fotoanao. Izahay dia hizara dingana fampidinana haingana sy mora aminareo rehetra. Tadiavo fotsiny ny bokotra fampidinana ary manaova paompy tokana eo amboniny. Hanomboka ho azy afaka segondra vitsy ny fisintomana.
Zaky App no ​​sehatra ho an'ny olona, ​​izay te-hihaona amin'ny olona vaovao. Manolotra fanangonana mpampiasa marobe, izay vonona hiresaka aminao izy. Noho izany, apetraho ity app ity ary ampidiro ireo fiasa rehetra misy. Raha manana olana amin'ny fampiasana an'ity fampiharana ity ianao dia aza misalasala mampiasa ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany hizara ny zavatra niainanao.
Sokajy Apps, Social Tags App chat, Zaky Apk, Zaky App, Zaky Ho an'ny Android Post Fikarohana
Nanalien Apk 2022 Download ho an'ny Android [Vaovao]